Inona no hafainganam-pandehan'ny mpitaingina bisikileta matihanina? - Mark Cavendish
Tena > Mark Cavendish > Marka haingam-pandeha ambony cavendish - Manual tanteraka
Inona no hafainganam-pandehan'ny mpitaingina bisikileta matihanina?
Tour de France 2019 amin'ny isa | Azonao atao ve ny maminavina ny voarakitra haingana indrindrahafainganam-pandeha?
TopBOKY marohafainganam-pandeha: 101.5kph (63.1mph)
Fiakarana antononyhafainganam-pandeha: 20.6kph (12.8mph)
Isan'ny dingana azon'ny mpandresy ankapobeny: 0.
Hatramin'ny nanombohan'ny ankamaroantsika tamin'ny bisikileta dia nisy ny faniriana mahazatra: Hatraiza ny haingana vitantsika no antonony amin'ny fitsangantsanganana ataontsika bisikileta? - Ary ity dia marika voajanahary tena tsara ary iray izay hahitanao ny fandrosoana mandritra ny volana sy taona maro amin'ny bisikiletanao. Fa ahoana? azontsika atao ve ny mamoaka ny herin'ny extracome? - Ooh, manana hevitra vitsivitsy momba an'io aho. - Andao hojerentsika. - Angamba afaka mitaingina zotra mitovy amin'izany ianao.
Raha mbola tsy mahita fandrosoana ianao amin'ny hafainganam-pandehanao dia mety ho diso hevitra azy ireo ianao. Tsy ampy ny familianao raha ny marina, mba hampisondrotra ny làlanao araka ny itiavanao azy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mety ho efa trotraka ianao. Ka andramo ny zotra samihafa misy karazany maro kokoa.
Ary ny teboka fanombohana tsara dia ny fanaovana ny dianao tianao indrindra - Ny antony iraisana fahitan'ny olona ny lembalemban'ny fandrosoany dia satria manao ny fotoam-pivoriana iray isaky ny mandeha fotsiny izy ireo. Tsy mety izany .- Fahita loatra amin'ny mpitaingina bisikileta izany rehetra izany ary mirona hijanona amin'ny hafainganam-pandeha sy ny lalan-kaleha ihany izy ireo, saingy tsy hanery ny fanitsiana fanatanjahan-tena izany, ka andramo afangaro ary apetraho anaty elanelam-potoana.
Midika izany fa tsy hahita ny fahasamihafana amin'ny ezaka ataonao ianao. Ary ianao dia hiasa ao anatin'ilay afovoan-tany mampatahotra. Ary ny fitaizanao? hisy vokany mitovy amin'izany.
Tsy ho afaka hampirisika ny vatanao ho ampy vatana ianao. Hitandrina azy fotsiny ianao. Ary tsy misy mila izany.
Atombohy amin'ny alàlan'ny famelomana aina ny fanodihanao. Raha tena mila hafainganam-pandeha kely fanampiny maimaim-poana ianao, makà andro tsy fiasana roa andro alohan'ny asa mafy ataonao hametrahana ny hafainganam-pandehanao vaovao. Manaova vola kely iray andro talohan'io mba handoana ny tongotrao ary hahatsapa ho mihasalama sy matanjaka noho ny teo amin'ny dianao izao.
Ny bisikileta dia fanatanjahantena aerobika an'habakabaka. Midika izany fa hahazo tombony bebe kokoa ianao amin'ity ezaka ity ao anatin'ny roapolo ka hatramin'ny enimpolo minitra. Ny fiasana amin'ny fampihetseham-batana mahery vaika mandritra io fotoana io dia mampitombo ny fahaizan'ny aerobika.
Io dia ahafahantsika mitondra fiara amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta. - Hanampy amin'ny fandokoana ny sarin'ny ezaka hataony izany mba hampitomboana ny hafainganam-pandehanao. Hanampy anao hahatakatra hoe rahoviana ianao no hiadana kely ary mila mahita ny fotoana na ny hafainganana, fa kosa rehefa afaka mandroso amin'ny fomba mahomby ianao hampitombo ny salanisa - koa mifantoha amin'ny lafiny rehetra amin'ny dianao sy ny momba an'io mitaingina io. - Mandra-pahoviana ny mitaingina anao? Ary manova ny hafainganana azonao hajanona mandritra ny fotoana maharitra ve izany? Raha manomboka haingana loatra ianao dia hiadana, sa tsy izany? - Ahoana ny famenoana solika ny dianao ary alao antoka fa feno lasantsy mandritra ny dia manontolo ianao.
Ary raha mila mandrehitra solika eny an-dalana ianao. - Ary ahoana ny amin'ny tanety? Rehefa havoana dia tsy maintsy mandeha miadana ianao - Ary raha mijanona na miadana zavatra eo amin'ilay làlana ianao satria misy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandehanao sarobidy - Ary farany, ny safidin'ny fitaovana sy fitaovana. Ny fanananao fitaovana sy fitaovana ary akanjo mety, dia hanampy anao amin'ny fikatsahanao hafainganam-pandeha ambonimbony kokoa - raha tsy manana mari-pahaizana mety amin'ny toeram-ponenanao na ny faritra misy anao ianao, dia azo ovaina haingana sy mora ny raharaha.
Marina? - Mba hanatsarana ny hafainganan'ny hafainganana dia mila mieritreritra ny hafainganana ianao amin'ny rafitra. Izany no izy-- Ny zavatra hitantsika matetika loatra ary nanao ny tenantsika dia nandao ny ambany fiakarana ary reraka tanteraka - ny oksizena dia manery antsika hihemotra ary hiadana hisambotra ny fofonaintsika.
famerenana pivot switchblade
Inona no mitranga avy eo? Miketrika sy miadana eo an-tampon'ny fiakarana ary very io haingam-pandeha sarobidy niasanao mafy io. - Fa andramo ny manangana hery rehefa mandeha amin'ny faran'ny fiakarana ianao ary avy eo te-hipetraka any amin'ny faritra afovoany ho an'ny ezaka maharitra. Fa ny ezaka mafy indrindra dia mbola ho avy.
Ary ity rehefa tianao avela hianjera amin'ny tampon'ny fiakarana na amin'ny fidinana manaraka. Ity no fomba mahomby indrindra hananganana hafainganam-pandeha tsara sy hitazomana izany haingam-pandeha sarobidy izany - Raha mipetraka amin'ny tany malaso ianao dia diniho ny fomba hanafainganana ny dianao. Manoro hevitra anao izahay hanomboka amin'ny fiezahana izay fantatrao fa azonao atao mandritra ny fotoana feno, fa raha manana efitrano kely kokoa hanafainganana azy hatramin'ny farany ary raha ny andro dia mandeha tsara ianao, dia be rivotra, dia mila mieritreritra ny fomba ahenao ny habetsaky ny ezaka ataonao.
Na dia mahatsiaro ho tsara aza ny mitaingina tsy misy tailwind satria tena haingana ianao, tsy izany no fampiasana angovo tsara indrindra. Sa izany? Satria raha mihodina ianao ka mahatratra ny lohany dia tsy misy sisa tavela amin'ny tongotrao.- Ankehitriny dia tsy milaza averiko tanteraka.
Fa raha miezaka mafy ianao ary mitondra ny tenanao miaraka amin'ny hafainganana amin'ny tailwind, raha ny resa-drivotra dia tsy hanana hery intsony ianao hiadiana. Ary ankehitriny fa miresaka ny rivotra sy ny rivotra isika dia tonga ny fotoana hanovana ny toerana misy anao amin'ny bisikileta. Mba hahatonga anao ho lasa aerodynamika bebe kokoa amin'izay azonao atao, manety lavaka kely amin'ny rivotra.
Ny fiovana kely dia miteraka fahasamihafana lehibe amin'ny fitsitsiana angovo sy ny fitsitsiana angovo dia mitovy amin'ny hafainganana. Valio amin'ny farany ity fanontaniana ity amin'ny farany: tena miezaka mafy araka izay eritreretinao tokoa ve ianao? Mametraha hafainganam-pandeha haingam-pandeha haingana isaky ny mitondra fiara. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny famelombelona dia mety ho zavatra tena manampy anao raha te hametraka hafainganam-pandeha haingana ianao fa aza manantena mihoatra ny indray mandeha na indroa isan-kerinandro.
Haingam-pandeha haingam-pandeha kendrena amin'ny dianao, andao ho fantarintsika amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany ny hafainganana ezahinao sy salanisa. - Ary raha tianao ity lahatsoratra ity dia omeo ankihibe izy.
Haingam-pandeha ahoana no ahafahan'ny mpitaingina bisikileta mihazakazaka?
tsara lavitra toy inona moa ireo bisikileta tsara indrindra eran'izao tontolo izao raha hiakatra raha oharina amin'ny sisa tavela dia ho hitantsika fa tonga ny fotoana ho an'ny vao manomboka vs amateurs vs fanontana an-tendrombohitra pro izay mahatsiravina, izaho dia iray amin'ireo zavatra lehibe manerantany Ny bisikileta tsara indrindra amin'ny daty fitsaharana dia tsy mitovy amintsika. Ny hafainganam-pandeha mahavariana sy tsy mampino izay ahafahanao miakatra dia iray amin'ireo zavatra nampirongatra ny eritreritro tamin'ny fahatanorako ka nahasarika ahy ilay fanatanjahantena. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampitahaintsika ny hafainganan'ny fifadian-kanina ataon'ny vao manomboka, na iza na iza, ary matihanina mpihanika ity havoana ity, Kohl de Bana dia afaka midina fiakarana 2,6 kilometatra miaraka amin'ny naoty eo amin'ny fito isan-jato eo ho eo fa ny lava indrindra amin'ny sary 15 hoy izy ireo. ity fiakarana ity dia lava sy lava be ka tsy dia hidina tsy an-tongotra ny mpandeha bisikileta maro io no vavonintsika fa iza kosa ny mpitaingina antsika eto dia misy fampahalalana bebe kokoa izay freddy izy dia vao manomboka nanomboka nitaingina tamin'ity taona ity ary na dia manana tsimok'aretina tsiro tsy azo tanterahina aza avela hamitaka anao izy fa vao manomboka izy fa tsy bisikileta matihanina mahia dia milanja lanjan'ny 92 kilao ara-dalàna sy salama no mandray izany satria mitaingina sy mitaingina be ny tia antsika ireo tia am-pitiavana. tsy manana ny talenta sy ny fototarazo aho raha ampitahaina amin'ny olona antonony eny an-dalambe any fitso, te hahalala ny fomba ampitoviko amin'ny fampitahana hafa ho referansa aho, 68 kilao no andrew feder, porofonay ny anarany. mora izy indroa ary c Tompondaka an-tendrombohitra britanika urrent eo anelanelan'ny 1 sy 10 minitra dia eo izy manana ny tsara indrindra vo2 max eto an-tany dia 81 izay raha ny zava-misy dia manodidina ny in-droa ny olona antonony nefa mbola fako raha oharina amin'ny alika mangidihidy izay manodidina ny 240 oh eo ary 65 milanja fotsiny kg izay nandrakitra an'ity fiakarana ity dia manodidina ny dimy minitra sy sasany, ary eny Andrews izany firaketana izany, saingy alohan'ny handehanantsika dia misy poll, kitiho ny efijery ary azonao atao izao ny mifidy izay heverinao fa handresy amin'ny hazakazaka fanokafana ataonay, Anner Down Banner Down Road 1.6 kilaometatra fa eo no alehantsika ary ny hazakazaka hataontsika dia fanombohana mihombo ka manomboka i Freddie, mpanafika antsika, minitra voalohany aorian'izay dia handeha aho, arahin'ny fanenjehan'i Andrew iray minitra taorian'izay, azafady, azafady, nanana torohevitra ho an'i Freddie ve ianao na ho an'ny tenako aza dia misy apro.
Heveriko fa mety tsy hanomboka mafy loatra ny torohevitra ankapobeny, um ary fantatro fa fisaka somary somary fisaka ilay faritra afovoany, angamba mipetraka eo amin'io faritra io toa an'io? Afaka mahazo toerana aerodinamika tsara ianao, saingy eh, fiakarana henjana izy io, lava be ary mirary soa anao roa, misaotra, raha tokony nesorinay ny kasety fitanana tahaka ny nataonareo, tsy azoko antoka hoe ohatrinona ny tahiriko manaova hanaovako azy, fa mety mbola psikolojika rehetra io rehefa mikapoka antsika izy, ka zahao ity, eny marina Freddy, teraka ianao vonona, vonona hanome anao volo vitsivitsy, eny, tsy maninona, izany no laser voalohany maranitra hazavana, raha mahavita manantona izy dia tsy hanao izany aho? tch himohthis dia mahatsiravina beepepepi nanao ny diany ho any freddie, efa niainga teo amin'ny achris hoy toy ny hafainganam-pandeha ary manantena aho fa tsy ho hainy ny manakana an'io, tonga hatramin'ny iray minitra ary tsy tazana intsony izy ireo, noho izany toa tsy maintsy manao famerenana isa aho ary avy eo manandrana misambotra azy, tsara rehefa nahita an'i Freddie teo alohako aho dia afaka nitazona ny diako ary nidina avy eo amin'ny lasely noho ny lalana niditra Nosokafana fanindroany , jesosy tsy fantatro ary nandrava i Andrew ary nanao asa fohy an'i freddie hanidy ny banga nosamborinao aho, andriamanitro, mandeha mafy araka izay vitako aho maherin'ny 400 watts maty aho, Andriamanitra ô, halako ianao, nandoa vola izao ifféddie satria efa nanomboka mafy izy nanohy niady tamin'ny fiakarana ary tamin'io fotoana io dia nanomboka nihena kely ny heriko, saingy nahavita nanangona ny tenako tamin'ny tsipika fahatongavana aho ary nametra ny fatiantoka azoko tamin'i andrewyeah. Afaka mahatsapa ra aho, sarotra izany, lalaovina ara-drariny, na dia nandalo ahy toy ny nijoro fotsiny aza ianao, tsy izany fa tena niasa aho. Faly iry, avelao hampifaly an'i Freddy fa tokony ho eny an-dàlana isak'andro izy, oh pushokayyeah asa tsara oh jesosy, ahoana no anaovanao speakah izay nampihoron-koditra, fananganana karaoty tsara fotsiny, ka nahavita ny fiakarana mieritreritra ny iray amin'ireo mpitanja-javatra lehibe amin'ny bisikileta, na inona na inona hatsaranao na haavon'ny fahaizanao, rehefa miakatra fiakarana ianao avo fa mahatsapa isika rehetra fa handeha hamaky boky ary afaka mahatsapa rà isika rehetra ary wild dia tsara tarehy fa toy ny lalao ara-drariny ho an'ny andaniny ianareo dia midika izany fa noravan'i Andrew tanteraka isika rehetra ary nanamora ny nanamboarana azy tao anaty dimy mampihomehy minitra 20 segondra izay tsy mitombina, inona no fantatrao fa momba ny zava-bitanao, mieritreritra aho fa ambanin'ny 500 fotsiny izy io saingy mahaliana ny miverina 500 watt, satria somary miadana kokoa noho izany aho? Ka nahavita nisambotra tsara ny ahy izy, fantatrao, mendri-kaja tsara tarehy, nanao fiakarana tao anatin'ny enina minitra 40 aho, izay 20 minitra 20 segondra miadana kokoa noho ny tsara indrindra vitako, saingy manana iray minitra izy ireo ary 20 segondra napetraka tato amiko no lasa izaho toa nijanona nijanona ary nanao salan'isa 385 watts aho mba ho tsara tampoka ary nahavita nihanika i Freddie izay ny 1328 dia midika hoe lalao ara-drariny toa izany, mbola tsy nijaly be loatra tamin'ny tenako mihitsy aho? Nampihoron-koditra ny fiainana, eny nampihorohoro izany, oh tsara ny nataonao, tsy mbola nianika an'io fiakarana io ianao talohan'ny nahalalanao ny hatsaran'ny fitempon'ny fonao? 177, heveriko fa ny hafainganan'ny nahatratraranao ahy dia tsy nino fotsiny aho, nampihomehy fotsiny aho, nataonao mora be, tsara daholo, tsara, misaotra, misaotra betsaka amin'ny anao Time ry zalahy misaotra ianao ho ahy fa misy ny fiolahana amin'ity tantara ity, raha ara-teknika dia tsy matihanina ny pro andrew anay, manana asa mpisolovava maharitra izy ary herintaona sy fianakaviana iray izay mahatonga ny zava-bitany vao mainka mahavariana ny zava-bitany sy ny fizika nataony. eo an-tampon'ny zavatra azon'ny matihanina atao ary raha ampitahanao ny nataon'ny olona toa an'i julie sy allah philippe tamin'ity fampitomboana ity dia fotoana iray nitoviana tamin'i andrew, fa ny mahasamihafa azy dia olona toa an'i julian alla philippe no afaka mianika ity fiakarana ity amin'ity indray mitoraka ity rehefa avy nihazakazaka 200 kilaometatra tamin'ny tongony, izay haavo hafa tanteraka ary tena mahavariana Manantena aho fa ho hitanao fa mahasoa sy mampahalala ary mahaliana ity lahatsoratra ity, raha manana ianao dia mba omeo ankihibe sy ampahafantaro anay eo am-piandohana ts inona ny lahatsoratra fampitahana tianao ho hitanao amin'ny ho avy, antenaina fa ho tonga amin'izany izahay mba hahitsy. Hanao fanazaran-tena kely kokoa aho satria heveriko fa mila izany aho
Haingam-pandeha ahoana ny mpandeha bisikileta mpitaingina bisikileta?
Ireo mpihazakazaka bisikileta matihanina dia mazàna mitazona 25-28 mphfisakatany.
Ianao ve mitady torohevitra momba ny fomba hahazoana hafainganam-pandeha bebe kokoa amin'ny familiana amin'ny lalana fisaka? Aza mitady lavitra intsony. Hofoaninay ny lafiny rehetra amin'ny dia lavitra sy haingam-pandeha ary homena anao ireo fitaovana ilainao rehetra hamadihana ireo ezaka taloha tsara rehetra ho hafainganana. (Hira upbeat) Marina, ny zavatra voalohany aloha, isika mpitaingina bisikileta dia mila mahatakatra ny zavatra iasantsika sy ny fiarahantsika miasa raha ny mitondra fiara haingana amin'ny arabe fisaka satria be ny hery ivelany tafiditra ao.
Rivotra fanoherana, fanoherana mihodina, fifandirana ary tsy fahatomombanana. Fa marihina fa tsy afaka manafoana tanteraka ireo lafiny rehetra ireo isika. Fa ny azontsika atao dia ny mampihena ny vokany ratsy.
Ka inona ny zavatra lehibe indrindra azontsika atao mba hahazoana hafainganana maimaim-poana? Whoa! (Mozika upbeat) Ny drag aerodinamika no sakana lehibe indrindra amin'ny fahitana hafainganana, sahabo ho 90% ny drag no tsapanay. Ahoana no ahafahantsika mampihena izany? Diniho aloha ny toerana misy antsika. Azontsika atao ny manondrika ny sandrintsika, manamboatra ny tenantsika somary lava kokoa, mampidina ny lohantsika, ary manetsika ny tanantsika hatramin'ny latsaka aza.
Ireo fanovana misimisy ireo dia afaka mamonjy hatramin'ny 33 watt ary mandeha 30 kilometatra isan'ora. Saingy tokony ho afaka hahazo ny hery amin'ny alàlan'ny pedal ianao. Tsy misy dikany ny maha aerodynamika faran'izay azy, saingy tsy ahazoana aina na tsy mahafoana ny hery.
Ka io no mandanjalanja. Fa ny aerodynamika no tena lakileny. (Mozika Fandresena) Azonao atao ihany koa ny manisy fanovana vitsivitsy amin'ny bisikiletanao ary manaisotra kojakoja tsy ilaina toy ny kitapo na jiro lehibe na lapoaly na tavoahangy, karazana zavatra toy izany.
Te hitazona ny bisikiletanao ho tsara sy milamina ianao. Azonao atao koa ny mividy hafainganam-pandeha. Ny hatreto no toerana tsara hanombohana azy.
Azonao atao ny mahazo aerodynamika mahafinaritra izay hampifanaraka anao amin'ny toerana aerodynamika ambany sy kokoa. Fanavaozana iray hafa azonao atao sy manana bisikileta mijery mangatsiatsiaka kokoa ny fampivoarana ny kodiaranao. Azonao atao ny misafidy rims lalina kokoa izay aerodynamika kokoa, saingy tadidio fa tsy ny kodiarana rehetra dia noforonina mitovy.
Aza atao ambanin-javatra ny fitafianao sy ny fiarovan-doha amin'ny rakotra aerodynamika kokoa, fa azonao atao ihany koa ny misafidy akanjo mety amin'ny bisikileta mety hanaparitaka ny rivotra somary haingana kokoa, ary raha ny marina dia mora kokoa noho ny misafidy fibre karbonika lalina io. kodiarana. (mozika upbe) Ka aerodynamika kokoa isika ary mitondra haingana kokoa amin'ny ezaka mitovy, fa ahoana no fomba hahamety kokoa io ezaka io? Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha kely. Ankehitriny isika dia tsy afaka manome afa-tsy herim-pahefana iray amin'ny fotoana iray, ka tsy maintsy araraotintsika tsara.
Ka ny tiantsika hatao dia aza mandeha mafy loatra. Ohatra, manana làlana fisaka 20 kilometatra izahay, te hiezaka hitazona ny hafainganam-pandeha ho an'ny kilometatra vitsivitsy voalohany toy ny farany, manao ezaka maharitra. Tsarovy izao, ireo kilometatra voalohany dia hahatsapa ho mora kokoa noho ny farany.
Tsy azo ihodivirana intsony izao ny fanananao sakana mihodina, angamba fiakarana sasany, raha tsy mipetraka any Holland ianao dia mila mandeha mafy kokoa amin'ny fiakarana sy any an-tampony ary izany dia satria mahatohitra rivotra ny nemesis taloha e. (mozika faly) Hery iray hafa tsy maintsy resentsika amin'ny bisikileta ny fanoherana mihodina. Ny fanoherana mihodina dia ny fifanolanana eo amin'ny kodiaranao sy ny atin'ny lalana.
Arakaraka ny malama ny lalànan'ny lalana no handehananao haingana kokoa. Raha mitaingina faritra malamalama ianao tahaka ilay nitaingenantsika anio dia tsara indrindra ny fanerena kodiarana mafy kokoa. Saingy amin'ny tontolo tena izy dia tsy milamina toy ny iray ny arabe.
Angamba te-hanitsy ny tsindry kodiaranao ianao, mandehana milamina kokoa. Ny fanerena kodiarana mafy kokoa amin'ny faritra misavoana dia mandefa fihoaram-pefy amin'ny bisikiletanao sy amin'ny vatanao ary midika izany fa mila mampiasa hery bebe kokoa ianao hihoarana izany ary, raha ny marina, mila hery bebe kokoa ianao hihoarana azy io raha tsy mihasimba ny kodiaranao. Miankina amin'ny atiny no itondranao azy, miankina amin'ny fanerena kodiarana ilainao izany.
Ka, ohatra, raha mpamily 75 kilao ianao ary mihazakazaka kodiarana 25 milimetatra dia manome toky manodidina ny 70 ka hatramin'ny 100 PSI izahay. Azonao atao koa ny mividy zavatra sasany hampihenana ny disadisa, toy ny fahazoana kodiarana vaovao. Manana ny GB 5000 aho, izay iray amin'ireo haingam-pandeha indrindra eny an-tsena, saingy azonao atao koa ny mampiasa fantsom-pitaovana afovoany ary hampihena ny fifandiranao koa izany. (Hira fifaliana) Ka noho izany aero kokoa isika ary mahomby kokoa nefa izao dia tokony hifantoka amin'ny moterantsika isika.
Raha tsy afaka manao fampisehoana tsara isika dia tsy handeha haingana. Ankehitriny dia misy fomba maro samihafa hampiofanana amin'ny fomba hafa, saingy amporisihinay hijery faritra roa. Amin'ny lafiny iray, ezaka mafy, maranitra ary mafy.
Ary faharoa, hananganana ny haben'ny moteranao amin'ity ezaka maharitra ity mandritra ny 15 minitra. Atombohy amin'ny fampiofanana turbo-tastic mandritra ny efa-minitra, famaranana feno, fa alao antoka fa efa sitrana tanteraka ianao alohan'ny hanaovana azy indray. Ary avy eo, ny fananganana an'io fampisehoana maharitra io.
Ka izany no fiezahana 20 minitra eo ho eo amin'ny 80% amin'ny fampihetseham-po hitanao, tena mahafinaritra tokoa satria azonao atao ny mitazona azy ho toy ny mahazatra. Azonao atao izany eo afovoan'ny dia. Mitadiava làlana fisaka mahafinaritra, araraoty ny herinaratra ary asio fampisehoana tsara.
Izy io dia zavatra tena naoriko ho matihanina. Niresaka momba ny isa, elanelam-potoana avokoa, fa ankehitriny afaka mandeha mafy sy haingana aho isaky ny misy iriko. (Mozika faly) Manaraka izany dia ny specialise.
Ny tsara indrindra azoko atao raha tianao ny ho tsara amin'ity zavatra iray ity dia ny mampiofana hanao izany. Ohatra, raha te-ho tsara amin'ny fiakarana ianao dia manazatra fiakarana. Ary toy izany koa raha te handeha haingana amin'ny fisaka ianao.
Mahatonga anao ho tsara sy matanjaka ny fiakarana, saingy mivezivezy amin'ny toerana aerodynamika ianao, ka izany no mahasamihafa voalohany. Ny faharoa dia ny fomba anomezanao ny herin'ny fiakarana amin'ny alàlan'ny fanodinkodinana haingam-pandeha, ary ankehitriny dia misy ifandraisany amin'ny tsy fahatomombanana io, antenaiko fa nankafizinao ity lahatsoratra ity fa ny fampiharana dia tonga lafatra ka mivoaha any ary mandany fotoana bebe kokoa amin'izany, satria ianao avy eo dia afaka mahazo hafainganam-pandeha bebe kokoa. Raha tsy nahita zavatra izahay dia ampahafantaro anay ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Raha tianao ity lahatsoratra ity? eo avy eo omeo ankihiben-tanana, kitiho ny bisikileta raha mila torolalana bebe kokoa ianao.
Iza izao no mitaingenan'i Mark Cavendish?
Eto amin'ny GCN dia nanao lahatsoratra vitsivitsy tao amin'ny Paston momba ny fomba hivezivezy tsara izahay, ao an-tsaina fa na i Si, Matt ary Lasty aza dia tsy afaka namonjy ny ainay rehefa nahafantatra tsara izay nataony kely izahay. .. mifanena amin'i Mark Cavendish, hanome torohevitra 5 ho an'ny sprinters izy.
Marina, laharana 1
LOHAHEVITRA: SADY HATSARANA NY DISTANINA - AZA MANDEHA BE ALOHA! Raha mandeha 250m isika dia 12 segondra, mety fantatrao ve? Ho somary lava kokoa ho an'ny mpankafy izy ity ka tsarao ny halaviranao, tsy momba ny wattage anao tanteraka izany satria hitombo ny fahombiazanao, fa mandra-pahoviana ianao no mitazona io wattage avo io ho an'ny hazakazaka hazakazaka iray manontolo, fantatrao? Ho fantatrao ary tsy maintsy hampiofana azy ianao. Fa aza mandeha aloha loatra - mora ny mandeha maraina raha mahita ny tsipika fahatongavana ianao ary na dia mety hahazo fampisehoana ambony aza ianao raha maty ianao dia ho very haingana kokoa noho ny hafa LOHATENY: FIDIO NY GEAR 53 na 54 miaraka amin'ny 11 fantatrao fa lalantsara lehibe handehanana amin'ny lalantsara lehibe iray ary sprinter izany, fantatrao? Ny momba ny fiampitana ny arabe sy ny fanafainganana. Very ny herinao avy eo rehefa mifamadika ianao, very ny herinao sy ny tselika amin'ny pedal LOHATENY: ATSIMO NY TRANO ANAO Amin'ny sprint faobe raha vao te-handeha ianao, raha vao misafidy ny fotoana alehanao ianao dia tsy manao ' t misintona azy, mandeha ianao ary dia izay, tsy misy hafainganam-pandeha? Tsy misy hafainganam-pandeha amin'ilay haingam-pandeha fa ezaka fa araka ny nolazaiko hoe rehefa vita ny enti-modinao ary fantatrao izay azonao atao sy amin'ny toe-javatra manao ahoana - miakatra, fidinana an-doha na tailwind, fantatrao hoe hatraiza ny halavanao alohan'ny handehananao. ny sakafo TITLE: mitondra ny bisikiletanao amin'ny tongotrao isa 4 marina dia mahita bisikileta be dia be ianao ary rehefa mihazakazaka izy ireo dia mandeha ary mamoaka anao fantatrao? Ary izany dia satria mampiorina ny tongony amin'ny pedal toy ny fianihana ry zareo.
Raha ianao izany Rehefa miakatra, dia mahazo ny tongotrao ambonin'ny tampon'ny sy ny pedal, fantatrao? Rehefa mihazakazaka ianao rehefa mety mahatsapa fahombiazana ary mahatsapa ho very hery. Hitako fa mahomby kokoa hatrany ny mitondra ny bisikileta amin'ny tongotrao, raha toa ka misy dikany Ka mampiasa ny sandrinao ianao ary mitaingina ny bisikiletanao fa tsy mitondra ny tongotrao amin'ny bisikileta dia efa nahita hadisoana telo aho ' nanao nandritra ny 10 taona tsara! LOHATENY: TONGA LOWRight, farany, tip nomer 5 ho an'ny sprinters vao manomboka rehetra, heveriko fa izany no tena itiavako azy ary izany no hijanonana ambany, mba ho marina, nataoko foana io tsy fantatro raha io ny lalana sa tsia ny tongotra fohy sy ny halavako fa hitanao i Caleb Ewan ny halalin'izany dia tombony aerodynamika goavambe fantatrao? Rehefa toy izany ianao dia tena manidy ny lavaka eto ianao raha ampitahaina amin'ny hoe mihazakazaka toy izao ianao Ilay lavaka lehibe, ilay lavaka be banga hampidirina amin'ny rivotra Ka mijanòna ambany ary hitohy hanafainganana ny marina ianao, noho izany, torohevitra 5 izay afaka mampiasa daholo ianareo rehetra mba hahalasa haingana kokoa amin'ny sprint mba ahazoana fandresena bebe kokoa na valiny tsara kokoa. Hosedraiko izao ary ho hitako ny zavatra tsapako.
Hataoko ao anatin'ity haingam-pandeha ity avokoa ny toro-hevitr'i Marka, ka raha mandeha aho dia mandehana. Fitaovana havanana, mijanona ambany, 3, 2, 1.....
Noteneniko ianao mba hijanona ambany, mijanona ambany! Marina izany, mety ho tsara kokoa amin'ny fampiharana ny toro-heviny noho ianao ianao. Etsy ankilany, raha mila toro-hevitra fiakarana ianao dia ny tsindrio etsy ambony dia ho hitanao i Matt miresaka amin'i Alberto Contador. Ary raha mbola tsy hitanao ny tafatafa niarahana tamin'i Mark dia azonao atao ny mahita an'ity ambany pejy ity ary tsindrio eo afovoany mba hisoratra anarana, misy toro-hevitra maro hafa koa ao.
Haingam-pandeha ve ny 20 mph amin'ny bisikileta?
Haingam-pandeha - indications
Ny ankamaroan'ny bisikileta dia mety hahatratra 10-12mphantonony behainganamiaraka amina fiofanana voafetra. Fanandramana mitombina, antonony (lazao 40 miles): eo ho eo amin'ny 16-19 eo ho eomph. Mpitaingina klioba mahay mahay, mety misy fiofanana mahazatra tsy lavitra, lavitra eo ho eo (lazao 50-60 kilaometatra):roa-polo amby-24mph.
Ahoana ny fandehanan'ny mpitaingina bisikileta haingana be?
Saingy ny fomba lehibe hafabisikileta matihaninamandehana beHaingankainganafa tsy ny sisa amin'ny hazakazaka toy ny Tour de France no fahaizan'izy ireo amin'ny fandrafetana na ny fivezivezena. Eo no amaritahan'izy ireo 'amin'ny kodiarana' an'ny mpitaingina eo alohanytoy izanyvoaaro amin'ny fanoherana ny rivotra izy ireo.21.07.2018
Malalaka ve ny kodiaran'ny bisikileta?
Ny valizy dia faritra iray hafa izayafakamatetika mahatonga akodiarana fisaka.Bisikiletydia mety manana ny valizy Presta, na, raha tendrombohitra ianaobisikiletampitaingina, nykodiaranadia mety manana valizy amerikana (valizy fiara). Raha manana valizy tsy mety ianao, ny fantsonao ao anatinydiatsy mitazona rivotra.
Inona ny hafainganam-pandeha ambony indrindra any Tour de France?
Haingana indrindraBOKY maroHafainganana: 63.1 mph
nyhaingana indrindraBOKY marohafainganam-pandehanyTour de Francedia avy amin'ny Alemanina Nils Politt raha nidina ny ColFromVars mandritra ny dingana 18 amin'ny hazakazaka.
Fa maninona i Mark Cavendish no tsy ao amin'ny Tour de France?
Roa taona tsy nahitana azy ioCavendishnoho ny olana ara-pahasalamana, ny tsy fahombiazana ary ny fahasarotana amin'ny fiarovana izao tontolo izaofitetezam-paritrafifanarahana. Nahazo ilay antso tampoka ilay sprinter anglisy taorian'ilay ekipa mpiara-miasa aminy ary nesorina hiala ny lisitra i Sam Bennett.29. 2021.
Mbola any Tour de France ve i Mark Cavendish?
Mark Cavendishscorches handratra fandresena eo amin'ny dingana 13an'ny Tour de France2021.Mark CavendishNandresynefaeo amin'ny sehatra 13 indrayan'ny Tour de France2021 taorian'ny fampisehoana mahatalanjona iray hafa.nyManxman izao dia manana fandresena an-tsehatra 34ny Tour de France, mitovynyrakitsoratra napetrak'i Eddy Merckx.17
Firy ny watt ananan'i Mark Cavendish eo aloha?
Misy famakafakana tena mahaliana an'ireo mpitaingin-tsoavaly maro an'ny Team Columbia taona roa lasa izay rehefa nandresy tamin'ny sehatra i Cavendish. Misy mpitaingin-tsoavaly vitsivitsy manana tarika 30-40 fanindroany eo alohan'ilay laharana 650-700 watt, ary eo amin'ny lohalaharana, dia eo amin'ny 700+ watts i Markus mandritra ny 30 segondra miaraka amin'ny tampon'ny 1000.
Taiza no nahavitan'i Mark Cavendish tamin'ny Tour de France 2016?